Mahwendefa edapter akagadzirwa kuti akwane zvese zvinozivikanwa pasi polishing uye kukuya michina. Ivo vari kubvisa kudiwa kwechero maturusi ekukurumidza shanduko kana kutsiva madhaimani ekushandisa. Ruoko rwakareruka uye chigunwe chemunwe zvinogona kubvisa zvikamu. Iyi inoshamwaridzika uye inochengetedza nguva sisitimu inobatsira kuchengetedza zvisina kufanira kupfeka uye kubvarura pamadhaimani kubva mukukanganisa turu yekushandisa. Yakakwira mhando, hupenyu hwakareba hwebasa uye mutengo wakaderera.
Chishandiso chinongotsvedza muchikoti chiri mundiro yeadapteri uye chinodhonzwa kana kuburitswa kunze kuwadhi kuti chigare chishandiso zvakachengeteka.
Aya mahotera ekuchinja Shanduko mahwendefa anoita kuti iwe ushandise Yekukurumidza Shanduko yedhaimani pane iyo Mashini. Yakasarudzika Fast shanduko yedhaimani sisitimu inoshandura muchina wako Aya mahwendefa anowedzera chigadzirwa chako nekudzikisa nguva yekuzorora kana uchichinja maturu edhaimani. Izvo zviri nyore kuisa uye Mahwendefa anowanikwa kune akawanda michina.
＊ Imwe ndiro yekushandura inomhanya zvidimbu zvitanhatu zvematombo trapezoid.
Change Iyo shanduko sisitimu inokurumidza, yakapusa uye yakachengeteka.
＊ Yakagadzikana nzira yekuisa madhaimani eplate maturusi.
＊ Zvinowanzoshandiswa zvakasiyana kukuya muchina.
＊ nguva - kuwedzera kugadzirwa
Hunhu, hupenyu hwakareba hwebasa uye mutengo wakaderera ..
Unogona kumhanyisa zvishandiso zvemadhaimani mapfumbamwe panguva. Chishandiso chinongotsvedza muchikoti chiri mundiro yeadapteri uye chinodhonzwa kana kuburitswa kunze kuwadhi kuti chigare chishandiso zvakachengeteka. Simbi dzako dzinogona kuchinjwa nekukurumidza uye nemazvo kuchengetedza iwe nguva pabasa.
＊ Imwe yekushandura ndiro inomhanya zvishandiso zvemadhaimani 9.
＊ Yakagadzikana nzira yekuisa iyo dhayamondi ndiro.
＊ Chengetedza nguva - wedzera kugadzirwa.
Quality Yakakwira mhando, hupenyu hwakareba hwebasa uye mutengo wakaderera.
Pashure: Bemhapemha Kubvisa Diamond Cup Wheel
Zvadaro: Trapezoid Kukuya Plate
Fiber Laser Kucheka Machine 6000w Plate Uye Pipe